गणतन्त्रका बाधक- विविधा - कान्तिपुर समाचार
‘मधेसतिरबाट आठ-दश टन लोकप्रियता ल्याउन खोजेको, उलार लागेर टिप्पर नै पल्टियो । झन्डै किचेर मारेको ।’
जेष्ठ १७, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
‘साढे ग्यारह जो भैगो । अब सवारी भैहाल्छ’ दारी मुसार्दै बाबाले भने । नभन्दै ११ बजेर ३३ मिनटमा महाराजको गाडी कम्पाउन्डमा दाखिल भयो । दुई मिनटपछि अर्को गाडी पनि ।
गोप्य ‘मिसन’ मा आएका मित्रदेशका प्रतिनिधिसँग महाराजको अति गोप्य भेटघाट थियो त्यो रात । ठाउँ थियो, रिङरोड नजीकै एक जना विश्वासिला भारदारको भव्य निवास । महाराज आफ्ना उँघिरहेका अंगरक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई छलेर खोपीको झ्यालबाट निस्की सालोको गाडीमा आएका थिए । साढे एघार बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यसपछि मात्र भेटघाट गर्नू भन्ने बाबाको आज्ञा थियो र त्यसै अनुसार समय मिलाइएको थियो । भेटघाट चलुन्जेल सँगैको अर्को कोठाबाट गोपनीय तान्त्रिक विधिद्वारा महाराजमाथि शक्तिपात गरिरहने उनको योजना थियो । ‘यसले महाराजको शक्ति जो बढ्छ’ उनले भनेका थिए । गाडीहरू कम्पाउन्डमा छिर्नासाथ बाबा कोठाभित्र छिरे र ढोका लगाए ।
दोस्रो गाडी मित्रदेशका प्रतिनिधिको थियो । उनी एउटी मैयाँसँग आएका थिए । बैठक कोठामा अतिथिको स्वागत गर्दै भारदारले भने, ‘के टक्र्याऊँ ? चिया, कफी अथवा होली वाइन ?’ अतिथिले अनिच्छा देखाएपछि महाराजको इशारामा उनी बाहिर निस्के र ढोका लगाइदिए । दोभाषे बनेको म समेत कोठामा चार जना बाँकी रह्यौं ।
‘आराम हुनुहुन्छ ?’ प्रतिनिधिले संवाद शुरू गरे ।
‘ठीकै छु भन्नुपर्‍यो कमरेड, १८ घण्टा खटिरहेको छु’ महाराज सीधै मूल विषयमा प्रवेश गरे, ‘तर गणतन्त्र खतरामा छ ।’
‘गणतन्त्र खतरामा रे ? कसरी ?’ कमरेडले जान्न चाहे, ‘सिंगो राज्य त तपाईंको मुठ्ठीमा छ । अनि खतरा चाहिं कताबाट भयो ?’
‘राज्य मुठ्ठीमा भएर के गर्नु ?’ महाराजले बह पोखे, ‘राज्यका एक-एक अंग गणतन्त्रका बाधक भएका छन् ।’
‘अलि खुलस्तसँग भन्नोस् । म यही सब बुझ्न आएको । हामी सक्दो सहयोग गरौंला,’ कमरेडले आश्वस्त गराए ।
‘खै के भन्नु ? मन्त्रिपरिषदकै भर पर्न नसकिने भयो । आफ्नै मन्त्रीहरू अरूका सेवक भएका छन् । जनतालाई पनि थाहा नदिने भनेर क्याबिनेटमा एउटा गोप्य निर्णय गर्‍यो, बैठक नसकिंदै निर्णय तीनवटा दूतावासमा पुगिसक्छ । पाँचवटा अनलाइनमा आइसक्छ ।’
‘मन्त्रीहरूको फोन टेप गराउनुहुन्न ? त्यसैबाट तिनको घाँटी समाउनोस् न ।’
‘गराउन थालेको छु । तर खै कसरी हो, निर्णयको फोटोकपी नै पठाइसकेका हुन्छन् । मेरो आईटी विशेषज्ञले पनि पत्ता लगाउन सकेन ।’
‘त्यो पत्ता लगाउने विशेष शक्तिशाली उपकरण पठाइदिउँला । चिन्ता नगर्नोस्’ कमरेडले सोधे, ‘संसद चाहिं कस्तो छ ?’
‘त्यो झन् ठूलो बाधक भएको छ, गणतन्त्रको । कुनै काम गर्नै दिंदैन । हरेक काममा खोट देखाउँछ । एउटा विधेयक पारित गराउन सरकारको १२ बज्छ । तपाईंहरूकहाँ जस्तो सजिलो कहाँ छ र ? मलाई त संसद भन्यो कि टाउको दुख्छ ।’
‘बुर्जुवा संसदमा सबैतिर यस्तै हो । सकेसम्म कम जाने गर्नुहोला’ कमरेडले भने, ‘अदालतमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्नोस्, सजिलो हुन्छ भनेर उहिल्यै सल्लाह दिएका हौं । त्यहाँ त ठीकै होला नि ?’
‘सक्दो भरेका छौं । नियुक्ति पाएपछि आएर दाम चढाउने पनि गरेका छन् । प्राय: मसँग सोधेरै निर्णय गर्छन् । तर कार्यकर्ता बाहेक अरू पनि मान्छे फाट्टफुट्ट भएकाले ढुक्क हुन सकिएको छैन । कुन दिन कुन चाहिंले गणतन्त्रको चाहना विपरीत निर्णय गरिदेला भनेर डर लाग्छ ।’
‘गणतन्त्र भनेर तपाईंले आफैंलाई भन्नुभएको होला । होइन त ?’ कमरेड मुस्कुराए ।
‘हो कमरेड, हामीकहाँ यस्तै भन्ने चलन छ’ महाराज ङिच्च हाँसे ।
‘लजाउनु पर्दैन । हामीकहाँ पनि यस्तै हो । हाम्रो गणतन्त्र पनि महासचिव कमरेडले जे भन्नुहुन्छ त्यही हो । जन गणतन्त्रमा यस्तै हुन्छ’ कमरेडले कुरा अगाडि बढाए, ‘यी त राज्यका तीन अंग भए । चौथो अंग चाहिं कस्तो छ ?’
‘त्यसको कुरै नगर्नोस् । गणतन्त्रलाई सर्वाधिक खतरा त्यसैबाट छ ।’
‘समाचार पार्टीले सेन्सर गर्दैन र ?’
‘तपाईंहरूकहाँ जस्तो पार्टीले सेन्सर गरेपछि मात्र समाचार छाप्न पाइने कानून हामीले बनाउनै सकेका छैनौं’ महाराजले निरीहता प्रकट गरे, ‘कोशिश गरेका गर्‍यै छौं, तर पार लागेको छैन । अलिकति कानून सुधार्न खोज्यो कि गणतन्त्र विरोधीहरू उफ्रिन थालिहाल्छन् ।’
‘बरबाद रहेछ । यस्तो भएपछि कसरी गणतन्त्र बचाउनुहुन्छ ?’ कमरेडले सोधनी गरे, ‘राज्यका अरू संयन्त्र चाहिं कस्ता छन् नि ?’
‘जेठा मामाको त भांग्राको धोती, कान्छा मामाको के गति ?’ महाराजले भने, ‘संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नै मान्छे पठाएका छौं । तैपनि वेलावेलामा तिनको मति बिग्रन्छ, हाम्रै मान्छेको कठालो समाउन खोज्छन् । अनेक कार्यालय र कर्मचारी छन्, ती पनि नियम-कानून अनुसार चल्न खोज्छन् । सबका सब गणतन्त्रका तगारा भएका छन् ।’
‘संविधानले त अवश्य पनि ठीकसँग काम गरेको होला ?’
‘केको ठीकसँग काम गर्नु ? गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै त्यही भएको छ । मेरा हातखुट्टै बाँधिदिएको छ । गर्न खोजेको कुरा गर्नै पाइँदैन ।’
‘यत्रो बहुमतमा हुनुहुन्छ । पार्टीको सहयोग लिएर संविधान संशोधन गर्नोस् र सर्वशक्तिसम्पन्न प्राधिकार बन्नोस् न । के समस्या छ ?’ कमरेडले बाटो देखाउन खोजे ।
‘त्यही गर्न खोजेको थिएँ, तर पार्टीले नै साथ दिएन । बरु विपक्षलाई गुलियो चटाएर मनाउन आँटिसकेको थिएँ, आफ्नै पार्टी गणतन्त्रको बाधक बन्यो । शक्तिशाली बन्छ भनेर साथीहरूले झन्डै मलाई नै सिध्याएका’ महाराजले खुइय गरे ।
‘हो त नि’ मैयाँ कमरेडतिर फर्किइन्, ‘त्यसवेला मैले नै नेताका घरघर पुगेर उहाँलाई बचाइदिएकी ।’ म झल्याँस्स भएँ । अघिदेखि मैयाँलाई कहाँ देखेको कहाँ देखेको जस्तो लागिरहेको थियो । त्यही वेला देखेको रहेछु ।
‘हामीले सधैं अगाडि आएर बचाइदिन सक्तैनौं । भित्रभित्रै सघाउन मात्र सकिन्छ’ कमरेडले भने, ‘मूल कुरो तपाईंको लोकप्रियता हो । त्यो घट्न भएन ।’
‘सारा ध्यान र तिकडम त्यसैमा लगाएको छु कमरेड’ महाराज किस्सा सुनाउन थाले, ‘पहिले कार्यकर्ता हँसाएर लोकप्रिय भएँ । पछि जनता पनि हाँस्न थाले । आकाशपाताल ल्याएर झन् हँसाउन थालें । लोकप्रियताको सीमै थिएन । जसको मुखमा पनि मेरै नाम । एक दिन जोकरहरू आएर ‘हजूरले गर्दा हाम्रो दानापानी हरण हुन लाग्यो’ भनेर रुन थालेपछि पो थाहा भयो, जनता त मैमाथि हाँस्न थालेका रहेछन्...’
हाहाहा... कमरेडले हाँसो थाम्न सकेनन् । मैयाँ मुख छोपेर खितखिताइन् ।
महाराज भन्दैगए, ‘त्यही भएर अस्ति मधेसतिरबाट आठ-दश टन लोकप्रियता ल्याउन खोजेको, उलार लागेर ट्रिपर नै पल्टियो । झन्डै किचेर मारेको ।’
‘यसरी हुँदैन’ कमरेडले रणनीतिक मार्गदर्शन गरे, ‘तपाईं-हामी जस्ताको अन्तिम सहारा भनेको राष्ट्रवाद नै हो । स्यामुएल जोन्सनले उहिल्यै भनिसकेका छन् । त्यसैको जोहो गर्न लाग्नोस् ।’
‘त्यो पनि एक जना मित्रले भर्खरै उपहार दिएका छन्— पूरै एक कन्टेनर । सानोतिनो पहाडै जत्रो छ । चिन्तै नगर्नोस्’ महाराज मित्रलाई सम्झेर दारी मुसार्न थाले । यद्यपि उनको दारी थिएन ।
‘गज्जब भएछ’ कमरेड मुस्कुराए, ‘नढाँटी भन्नोस् त, सल्लाह गरेरै उपहार दिएको त होइन नि ?’
‘तपाईंहरूसँग सल्लाह गरेका थिए र ?’ महाराजले कूटनीतिक उत्तर दिए । उनको मुस्कान कताकता व्यंग्यात्मक थियो ।
‘जे होस्, यो सामान्य उपहार होइन । लोकप्रियताको पावरहाउस हो । यसको उपयोग गरेर शक्ति सञ्चय गर्नोस् र आफूलाई बलियो पार्नोस् । हाम्रो शुभकामना छ’ कमरेड फेरि मुस्कुराए र जीउ अगाडि ढल्काउँदै महाराजतिर हात तेर्स्याए ।
त्यो गोप्य भेटघाट टुंगिएको संकेत थियो । महाराजको हात पनि तेर्सियो ।
उनीहरूले उठेर फेरि हात मिलाए । र, बाहिर उँघिरहेका घरबेटीलाई धन्यवाद दिएर आआफ्ना गाडी चढे ।
राति एक बजिसकेको थियो । भेटघाट सकिएको सूचना दिन म बाबाको कोठातिर गएँ । भित्रबाट घुरेको आवाज आइरहेको थियो । बाबा शायद स्वप्नमै शक्तिपात गरिरहेका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ १०:०८
सत्यमोहन दाइ जन्मिएको दिन रुसमा बोल्सेबिक उर्फ कमिनिस्टले जितेको एक वर्ष पुगेको थियो । पहिलो विश्वयुद्ध सकिएको पनि एक वर्ष पूरा भएको थियो । स्पेनी फ्लुले यो भेकतिर डेढ करोड मानिसको ज्यान गएको पनि एक वर्ष पुगेको थियो ।
जेष्ठ १७, २०७७ अभि सुवेदी
सत्यमोहन जोशी ३० वैशाख २०७७ को दिन एक सय एक वर्ष पुगेको खबर कोरोना महामारीले थिचेको नेपाली भूमि र प्रकम्पित आकाशमा एउटा अर्को तरंगजस्तो भएर आयो । केही भिजुअल र केही छापामा आयो । उनको यो खबरले सानै कुनामा भए पनि शब्दका सीमा फोर्‍यो । टीभीका स्क्रिनमा एक छिन भए पनि त्यो रह्यो ।
सत्यमोहन दाइ सय वर्ष पुगेको दिन पनि त्यस्तै तरंग आएको हो, तर अहिले फरक भएछ । तिनले पूरा गरेको शताब्दी एउटा युग हो जसमा हामी छौं, हिजोको समाज थियो, हिजोको एकतन्त्री शासन थियो । पञ्चायत, गणतन्त्र र अनेकौं दलका शासन हुँदै अहिले कमिनिस्टको शासन छ, नेपालमा । यी सत्यमोहन दाइलाई लिएर हेर्दा हाम्रो अगाडि एउटा युगको चित्र कहिले लैनसिंह बाङ्देलको अमूर्त कलाजस्तो, कहिले चन्द्रमान मास्केको सरल चित्रजस्तो भएर खुल्छ । हामी साठी नाघेका अझ सत्तरी हानेका नरनारी कोरोनाको झापट पहिले हामीमथि पर्छ भनेर वृद्ध चेतना र गतिले हिँड्छौं । सत्यमोहन दाइ १०१ वर्षको देह लिएर पाटनको देहहीन देह, समयहीन समय र कालहीन कालको कलात्मक परिवेशमा बसेर सबैलाई जीवनको सन्देश दिँदै बसेका छन् ।
सत्यमोहन दाइ जन्मिएको दिन रुसमा बोल्सेबिक उर्फ कमिनिस्टले जितेको एक वर्ष पुगेको थियो । त्रिचन्द्र कलेजको शिलान्यास गरेर चन्द्रशमशेर राणा आफ्नै चिहानको ढुंगा राखिएछ भनेर खङ्ग्रङ्ग भएको पनि एक वर्ष पुगेको थियो । पहिलो विश्वयुद्ध सकिएको पनि एक वर्ष पूरा भएको थियो । स्पेनी फ्लुले यो भेकतिर डेढ करोड मानिसको ज्यान गएको पनि एक वर्ष पुगेको थियो । सत्यमोहन दाइ र शताब्दी कवि माधव घिमिरे यी सबै घटनाहरूको छायामा जन्मेका थिए । मानिसहरूको भविष्यको कुनै ठेगान थिएन । तर सत्यमोहन दाइ यस्तो थलोमा जन्मिएका थिए जहाँ एउटा अर्कै विश्व थियो । कलात्मक थियो र स्निग्ध थियो । छेवैमा पाटन दरबार स्क्वायर, कृष्णमन्दिर, क्वाबहा:को सुवर्ण मन्दिर र अरू अनेकौं मूर्ति, पेगोडा शैलीका भवन र मठमन्दिर, साना सडक, टोलटोलमा टिक्टिक् छिना चलाएर प्रस्तर मूर्ति कुँद्ने, अनि काठका कला बनाउनेहरू सधैं क्रियाशील थिए । कलकल निर्मल पानी खस्ने अजस्र प्रवाह भएका ढुंगाका धाराहरू भएका हिटीहरू थिए । मानौं ती जन्मेको संसार बाहिरी संसारसँग मिल्दैनथ्यो । तर दुईपटक महामारी आएको हल्ला तिनले सानैमा सुने । तिनले यो भूमिमा भुइँचालोले ध्वस्त गरेका दुईवटा अनुभव गरे । एउटा केही वर्षपहिले हामीले पनि उनीसँगै भोग्यौं ।
सत्यमोहन दाइ जीवन्त र सक्रिय भइरहेको अवस्थामा हामी हाम्रो र अरूको शताब्दीका केही तरंगहरूलाई उठाएर हेर्छौं । धेरैलाई हाम्रो भविष्य प्रलय वा कसैले भनेको ‘एपोकालिप्स’ उन्मुख छ भन्न मन लाग्छ । हामी सबैलाई त्यस्तो लाग्छ होला तर सत्यमोहन दाइ त्यस्तो कल्पनालाई असत्य हो भनेर ठमठम्ती हिँडिरहेका छन् । भन्दै छन्, मेरो एउटा इच्छा छ, त्यो हो नेपालका कुनै पनि एउटा भाषामा लेखिएको साहित्यमा कसैले नोबेल पुरस्कार जितून् र म त्यो शान्ति बोकेर जान पाऊँ । यो कहिले र कसरी पूरा होला, म जान्दिनँ । तर एउटा कुरा जान्दछु, सत्यमोहन दाइको कल्याणको भावनालाई शताब्दीभरिका दुर्दान्त घटनाहरूले हल्लाएनन् । निरंकुश सामन्त शासक, पञ्चायतको तानाशाही शासन, आफ्ना निम्ति मात्रै काम गर्ने दलका सरकार र भ्रष्ट राजनेताहरूले हल्लाएनन् । नोबेल पुरस्कार अमूक नेपालीले जितून् भन्नु नै यो मुलुक शान्ति र सिर्जनाको थलो होस् भन्ने ठान्नु हो । नेपाली लेखकहरू नोबेल पुरस्कारका निम्ति आफ्ना कृति पठाउँछन्जस्तो लाग्छ । एक जना प्रतिभाशाली उपन्यासकारले उनको उपन्यास अंग्रेजीमा अनुवाद भैसकेको अवस्था भएकाले नोबेल पुरस्कारमा पठाउनुपर्‍यो भनेर मैले जानेसम्मका राय दिन भनेकी थिइन्, केही समयपहिले । लगभग सत्यमोहन दाइको जस्तै सद्भावनाले बनिएको काल्पनिकी भएका एक जना पेन नेपालका नजिकका मित्रले ‘नोबेल पुरस्कारका निम्ति तपाईं पनि लेखकहरूका नाम दिनोस्’ मलाई एकाध पटक भनेका थिए । ती नाम र कृति कसले कहाँ हेर्छन्, मलाई थाहा छैन । नेपालका कस्ता र कुन किसिमका कृतिले नोबेल पुरस्कार पाउँछन्, त्यो पनि मलाई केही थाहा छैन । सत्यमोहन दाइको एक अजस्र प्रवाह हो चेतनाको, त्यो । तिनको जीवन नै अजस्र शान्त नदी हो । साहित्यमा मात्र होइन, अरू क्षेत्रमा पनि नोबेल पुरस्कारका चर्चा आउँछन् नेपालमा ।
मंसिर ५ २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरेकोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम नोबेल शान्ति पुरस्कारका निम्ति पठाउने कुरा आयो । उनकी पुत्री र कांग्रेस पार्टीकी नेत्री सुजाता कोइरालाले मलाई त्यो पाठ सम्पादन गर्न पठाएकाले थाहा पाएको थिएँ । मलाई कताकताभित्र केही विश्वास जागेको थियो । नेपालका माओवादीहरूको युद्ध अन्त भएको र शान्ति सम्झौता भएको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हो, खासगरी यो भेकमा । यो सम्झौता गरेर नेपाली राजनीतिज्ञहरूले निकै ठूलो सफलता हासिल गरेका हुन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमा रगत धेरै बग्यो । सीमाहरू रक्तरञ्जित भए । सीमा एउटा प्रेत हो जसले तिमीलाई झम्टिरहनेछ भनेर लिग्यासी दिँदै अंग्रेज हिँडे । त्यो भूतले सीमाहरू बल्झाइरहेको छ । पाकिस्तान र भारतले सीमाको भूत बोकेर चलिरहने अवस्था, बंगलादेशमा ३२ लाख मान्छे मारिनुजस्ता घटना त्यही अंग्रेजले छोडेको सीमाको प्रेत ब्युँझिने क्रममा पर्छ । नेपालको सीमाभित्र बाटो बनाएर यसै उद्घाटन गर्ने भारतको काममा सीमाको त्यही आङ्ल स्मृति छ । माओवादीसँग भएको शान्ति सम्झौता एउटा यो क्षेत्रमा अलग र अनुकरणीय प्रयोग हो, नेपालको । गिरिजाबाबुको पाठ महत्त्वपूर्ण थियो । अर्को ठाउँमा कतै प्रचण्डको पनि नाम थियो कि थिएन, मलाई थाहा भएन ।
त्यो बृहत् शान्ति सम्झौता, त्यो नेपालका निम्ति ठूलो ऐतिहासिक घटना सत्यमोहन दाइको काल्पनिकीभित्र पर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन । तर त्यसपछिको समय हाम्रासामु छ । नेपाल हामीले कल्पना गरेको बाटोमा गएन । यो देशमा सत्यमोहन दाइले देखेको कल्याणकारी समय आएको छैन । शासकहरूले यो देशका जनताको सम्मान गरेनन् । कोरोना महामारीले एउटा प्रकट नभएको देश खुल्दै छ जनताको । थाहा नपाएको संख्या र गतिमा नेपाली एक छाक खाने बन्दोबस्तका निम्ति भारतमा गएका नागरिक ठूलो संख्यामा सीमापार गरेर पस्तै गरेका चित्र खुल्दै छन् । यो देशमा शासन गर्नेहरूका चर्चा धन कमाउने र जत्थाहरू बनाउने आफ्नो मूलकर्म बनाउनेमा आइरहन्छन् । लिम्पियाधुरायताको नेपालको भूमि राखेर नक्सापास गरेको ऐतिहासिक घटना हो । तर त्यो विषयलाई समाधान गर्नेतिर लाने शासकका दक्षता, वार्ता गर्ने व्यक्तित्व र इमानको आवश्यकता अहिले जति अघि कहिल्यै परेन । कोरोना महामारीले मचाइरहेको भयावह आतंकबाट ध्यान मोडिएको राम्रो होइन । यसको भयानक परिणाम जीवनका सबै क्षेत्रमा देखिँदै जानेछ ।
सत्यमोहन दाइ यो देशमा शासक र शासितका सम्बन्ध असहज छन् भन्ने जान्दछन् तर त्यसलाई कल्याणकारी भावनाबाट हेर्छन् । उनले लेखेका नाटक हामीले गुरुकुलमा मञ्चन गर्‍यौं । उनैको कारणले प्राप्त भएको भूमिमा बनिएको राष्ट्रिय नाचघरको मञ्चमा उनको अशोकपुत्री चारुमती नेपाल आएर विवाह गरी बसेको नाटक देखाइयो । मण्डला थिएटरमा सिरुमा रानीको लोककथामाथि उनले लेखेको नाटक मञ्चन गर्‍यौं । तेह्रौं शताब्दीमा चीन गएर श्वत चैत्य बनाएका अरनिकोमाथि यिनले किताब लेखे, त्यही विषयमाथि एउटा महाकाव्य लेखे । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।
नेपाली राज्यको अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या जानीबुझी गरिने विस्मृति वा ‘एम्नेसिया’ हो । मैले यही विषयमा यस्ता हरफ लेखेको थिएँ- ‘यहीँनेर इतिहासमा विस्मृतिको समस्या आउँछ । यस्तै मानिसहरूका निम्ति काम गर्ने सिद्धान्त र सपना कार्ल मार्क्स, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, महात्मा गान्धीजस्ता मानिसहरूले लिएका र दिएका हुन् । तिनका अनुयायीहरूले त्यही कुरा नबुझेर अक्षर जान्ने सुविधायुक्तमाथि मात्र अल्झेर, नजान्ने पीडितका निम्ति काम गर्ने राजनीतिको चरित्र गुमाउँदै गरेको नेपालमा ऐतिहासिक ‘एम्नेसिया’ को चरित्र देखिँदै जानु चिन्ताको विषय हो’ (कान्तिपुर १८ वैशाख २०७४) ।
एक सय एक वर्षका सत्यमोहन दाइ त्यही ‘एम्नेसिया’ विरुद्ध लड्दै छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ १०:०३